15 / 05 / 2013 - RayHaber
နေ့: မေလ 15 2013
ရထားလမ်း panel ကိုတူရကီတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများကိုယ်စားလှယ်များ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အစ္စတန်ဘူလ်ဌာနခွဲမှာတူရကီ 18 မေလ 2013 13.30 အတွက်ရထားလမ်း panel ကိုစနေနေ့ Kadikoy တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ သင်တန်းသားများကို: Bahcesehir တက္ကသိုလ် BTS (ယူနိုက်တက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြည်ထောင်စု) အစ္စတန်ဘူလ်ပို့ဆောင်ရေး Inc ၏ဗိသုကာပညာရှင်များအရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာများကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း [ပို ... ]
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးTrambüအဆိုပါ Malatyada အသွားအလာမှကြွလာ
Malatya မြူနီစီပယ် Trambus စီမံကိန်းသည်ဆွေးနွေးမှုနှင့် တွဲဖက်. အကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်။ နိုင်ငံများလည်းအစ္စတန်ဘူလ်အပြင်ဘက်မြို့ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများအတွက်အခြေအတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီနှင့်မြေအောက်ရထားစီမံကိန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ပြစကေးမြို့ကြီးများ Izmir မြင့်ခရီးသည်တင်စွမ်းရည်နှင့်အတူပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ အရွယ်အစား Metropol [ပို ... ]
Bursaray မကြာမီ Kestel နှင့်Gürsuရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်
Bursaray တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးနှင့် Kestel Gürsuရောက်ရှိဖို့: Altepe, နှစ်တွင်4၏စွမ်းဆောင်ရည်, ကို "မိကျောင်း Arena" ၏ကြာချိန်အောင် 45 တထောင်ကလူအားကစားကွင်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အခြေခံအဆောက်အဦများအနေဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ယဉ်ကျေးမှု, မြို့ပြကိုပျေါလှငျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏သမိုင်းဆိုင်ရာအမွေအနှစ် [ပို ... ]
Wall Sena Trabzon Erzincan ရထားလမ်းစီမံကိန်းမေးခွန်းများကိုတစ်ဦးမဲပေးခဲ့တယ်
Sena Wall Erzincan Trabzon အဆိုပါရထားလမ်းစီမံကိန်းအား CHP Bursa လက်ထောက်များအတွက်မေးခွန်းတစ်ခု လုပ်. Bayburt တာဝန်ရှိပါတီညီလာခံတွင်အဖွဲ့ဝင် Sena Wall, ပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌ Erzincan Trabzon ရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုစီစဉ်ထားအရှေ့ပိုင်းပင်လယ်နက်၏သွားတာကိုရည်မှတ်တဲ့အဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့ပါသည် [ပို ... ]
သြဂုတ်လအတွင်းကရာစုစီမံကိန်း Marmaray စမ်းသပ် drive ကို 1 (အထူးအစီရင်ခံစာ)
သြဂုတ်လထဲမှာ 1 Marmaray စမ်းသပ် drive ကိုခုနှစ်တွင်: "ရာစုစီမံကိန်း" နှင့် Marmaray စီမံကိန်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအစပျိုး xnumx't အဆုံးပိုမိုနီးကပ်စွာအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2004 ရာခိုင်နှုန်းကိုလှည့်ပတ်ပြီးဆုံး Marmaray အပေါ်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်, 95 သြဂုတ်လမှာစမ်းသပ်မောင်းနှင်ဘို့စီစဉ်ထားသည်။ Marmaray ဒေသဆိုင်ရာ Manager ကို Haluk [ပို ... ]
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Eskisehir ၏ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဖြန့်ဝေဘို့ရထားလမ်းလမ်းရထားစနစ်က
2013 / 45396 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Arifiye Mah ပေးပို့ESKİŞEHİRစည်ပင်သာယာတင်ဒါမှတ်ပုံတင်နံပါတ်များအတွက်ရရှိနိုင် Eskisehir ရထားလမ်းနှင့်လမ်းရထားစနစ်။2စက်တင်ဘာလ Caddesi အဘယ်သူမျှမ: 53 ESKİŞEHİRခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: လျ: + 90 222 [ပို ... ]
Uzungöl'de Ropeway Project ထဲတွင်အဆုံးသတ်သတို့သမီး
အဆိုပါကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုသတို့သမီးသတ်သွားပါပြီUzungöl'deခဲ့: Trabzon မြို့မှာရှိတဲ့ကေဘယ်လ်ကြိုးကားထဲတွင်တူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံးခရီးသွားလုပ်ငန်းစင်တာများ, Uzungol Çaykaraစီမံကိန်း၏အဆုံးအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ Uzungöl'de Garest ကုန်းပြင်မြင့်နှင့်ဘဝအကြားစီစဉ်ထား cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတွက် 12 ယူရိုသန်း [ပို ... ]
Haydarpasa ရထားဘူတာနှင့်စီမံကိန်းများအတွက်ဆိပ်ကမ်းကူးပြောင်းခြင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအမံခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍများတွင်ဖို့Haydarpaşaရထားဘူတာနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည် "Haydarpasa ရထားဘူတာများနှင့်အစီအစဉ်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၏စီမံကိန်းအပေါ်ဆိပ်ကမ်းကူးပြောင်းခြင်းကော်မရှင်အစီရင်ခံစာ, အစ္စတန်ဘူလ်ဟာမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကောင်စီ၏အများစုမဲကမွေးစား [ပို ... ]
44 Metrobus ဓာတ်လှေကားကိုစောင့်ဆိုင်းရပ်တန့်
44 Metrobus လေးလံသောအသွားအလာအလွန် Metrobus အစ္စတန်ဘူလ်ဓါတ်လှေကားဖြေရှင်းချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းရပ်တန့်ခြင်း, သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့်မသန်စွမ်းများအတွက်န်ဆောင်မှု၏တူညီသောအဆင့်ကိုမပေးပါဘူး။ ရပ်တန့်ဖို့ 44 28 မျှမသန်စွမ်းဓာတ်လှေကားထဲမှာ။ အဆိုပါဓာတ်လှေကား 16 ရပ်တန့်ရှိရာဓာတ်လှေကား၏အဘို့ကို [ပို ... ]
MetrobüsMetrobüs၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကချွတ်အတွင်းအသွားအလာဝန်ကိုလျှော့ချဖို့အသုံးပြုအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ မြေအောက်ရထားခရီးသည်၌ရှိသကဲ့သို့Metrobüsတစ်ထုံးစံအလားတူအချိန် access နှင့်အချိန်ကိုရပ်တန့်စေခြင်းငှါအရာမက်ထရိုနှင့်ပလက်ဖောင်း boarding နှင့် disembarking [ပို ... ]
Trabzon မီးရထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှဆွဲဆောင်မှုသို့သော်အချိန်ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဒုဝန်ကြီး Yahya ဦးခေါင်းသိသာသည်မဟုတ်, ကလမ်းသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်ကိုလေ့ကျင့် Trabzon မှဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ပဲ, ဒါပေမယ့်ဒါဟာလုပ်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါဤလမ်းကြောင်းသည်မသေချာသောကဆိုသည်။ အရှေ့ပင်လယ်နက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ [ပို ... ]
RayHaber 15.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ယောဘသည်လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုအလားတူမီးရထားသတင်းများအဆိုပါအမြင်အာရုံချို့ယွင်းစီးပွားရေး (TCDD xnumx.bölgညွှန်ကြားမှုအဆိုပါ4ပမာဏဘူတာများတွင်Mıntıkaနှင့်ဘူတာ) elasticity စုံတွဲစုံတွဲAlınacaktırဉမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်များအတွက်ထိတွေ့နိုင်သော Surface ကပစ္စည်း၏အလိုတော်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရေးကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားဖြစ်စေခြင်းငှါ [ပို ... ]
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံ Antalya 100 မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းတစ်ဦးလက်မှတ်ကမ်ပိန်းစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအမြင့်မြန်နှုန်းရထား (YHT) ကွန်ရက်စီမံကိန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်မှာ 2016 15 နှစ် Antalya နှင့်အတူအများအပြား 2023 ရှိနေစဉ်များအတွက်ယခုနှစ်အကြီးမားဆုံးပရောဂျက်တစ်ခုမှာ [ပို ... ]
ဂျပန်မီးရထားကုမ္ပဏီက Apple က iPad mini ကခုနစ်ထောင်ဝန်ထမ်းဖြန့်ဝေပါလိမ့်မယ်
ဂျပန်မီးရထားကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းခုနစ်ထောင်က Apple သည် iPad mini ကိုဂျပန်ရဲ့အကြီးဆုံးရထားလမ်းကုန်တင်ကုမ္ပဏီအရှေ့ဂျပန်မီးရထား (JR) ကုမ္ပဏီတဦးတည်းဖြန့်ဝေမည်, န်ထမ်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ခုနစ်ထောင်က Apple သည် iPad mini ကိုတက်ဘလက်ဖြန့်ဝေပါလိမ့်မယ်။ Kiodo သတင်းအေဂျင်စီ [ပို ... ]
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သွားရောက်ခြင်း tcdd`y (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တူရကီမီးရထားတူရကီပြည်နယ်မီးရထားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်Süleyman Karaman သစ် (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံလျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (EMO) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ phot ဆီသူ့ရုံးခန်းထဲမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဒီနှစ်Eskişehirdeလျှပ်စစ်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပလိမ့်မည်သည့်သိန်းစိန်ခရီးစဉ်အတွင်း [ပို ... ]
အပိုင်းအစစုဆောင်းနေစဉ်အလုပ်စဉ်အတွင်း Kocaeli Derince ခရိုင်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်းဒဏ်ရာရမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားအမျိုးသမီးတွေရဲ, သူတို့နှင့်အတူရိုးမားအမျိုးသမီးများ, တစ်ဦးသောဖြစ်ရပ်အတွက်ကြားဝင်ကြောင့်အတားအဆီးများတိုက်ခိုက်နေလုပ်သားများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ခြင်းကနေသံစုဆောင်း [ပို ... ]
ဥပဒေပြုအမတ်များပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကိုထံမှမျှော်လင့်ထားသည့်ထောက်ခံမှုများသဘောပေါက်ဘို့ Diyarbakir ရထားလမ်းစနစ်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်Kayapınaraအလင်းရထားလမ်း, - များထံမှ DagkapI ။ Diyarbakir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Fahrettin ခေတ်ပြိုင်မြို့လယ်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုအတွက်အရေးအပါဆုံး data ကိုပြောသည် [ပို ... ]
ဒီဖျက်သိမ်းစီမံကိန်းကို Trambus Malatya လား?
Malatya မြို့တော်ဝန် Ahmet Cakir နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးနှင့်စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနညှိနှိုင်းရေးမှူး Zeki အဝါရောင်, အစာပေးစာယူတွစ်တာအကောင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Malatya မြူနီစီပယ် "ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း (Trambus) အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကအားဖြင့်မြို့ပြယာဉ်ကြောပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှယခင်အကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည် [ပို ... ]
TCDD ၏ Start ကိုတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံပြခန်း) မှာကော်ပိုရိတ်ကဒ်လျှောက်လွှာ
အထူး application ကိုစတင်ခဲ့အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ '' corporate Card ကို '' ကပြင်ဆင်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာကော်ပိုရိတ်ကဒ်လျှောက်လွှာ Start ကို TCDD ။ TCDD Eskişehirဘူတာ Manager ကိုSüleyman Hilmi Ozer, စီးပွားရေးကဒ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာကပြောပါတယ် [ပို ... ]